"vivo VISION + Mobile Photography Awards သည် ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ (၎င်းကို“ ပလက်ဖောင်း” အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်) vivo မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် (နောင်တွင်“ vivo”၊ “ ငါတို့” သို့မဟုတ်“ ငါတို့ကို” ဟုလည်းခေါ်သည်) သည် သင်၏အတွက် မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံပညာပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ သို့မှသာ မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းများကို ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ တင်ခြင်းအားဖြင့် သင်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပေါ်လစီသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကာကွယ်ခြင်း vivo ၏ vivo Vision + Mobile Photography Awards ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး vivo သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိသုံးစွဲသူများ၊ ၎င်းတို့၏ဓာတ်ပုံများကိုတင်ခြင်းနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပေးသည်။ ပလက်ဖောင်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ဤတွင်“ ဝန်ဆောင်မှုများ” အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်)။ တရုတ်ပြည်ပြင်ပရှိ အသုံးပြုသူများသည် *** ကိုရည်ညွှန်းသည်။
vivo တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ၏ လုံခြုံမှုကို အလေးအနက်ထားသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများအပြင် စက်မှုလုပ်ငန်းရှိလုံခြုံရေး ရင့်ကျက်သောစံနှုန်းများနှင့်အညီ သင့်လျော်သောဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ပါမည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒမှ သင် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုစဉ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို့သိမ်းဆည်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ သင့်အနေဖြင့် သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မူဝါဒသည် နောက်ဆုံးအခြေအနေကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်သလို ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုသည် မူဝါဒအောက်တွင် ဖော်ပြထားသောအတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်သွားပါက ၎င်းကို သင် ထပ်မံအကြောင်းကြားပြီး သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်သည်။
၁။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်းပြီး အသုံးပြုမည်နည်း?
စာရင်းသွင်းပြီး ပလက်ဖောင်းကို ဝင်ရောက်ပါ
vivo VISION + Mobile Photography Awards တွင် ပါဝင်ရန် သင်၏အကောင့်အချက်အလက်များကို သင်၏မှတ်ပုံတင်ကိုအတည်ပြုရန်၊ သင်၏ထူးခြားသော မှတ်ပုံတင်အမှတ်အသားကို ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် သင်၏အချက်အလက်များကိုစီမံရန်အတွက် သင်၏အကောင့်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင်စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအကောင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏အကောင့် ID၊ ယာယီစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားများနှင့်သင်၏အကောင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ တည်နေရာ (နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသ) ကိုစုဆောင်းပြီး ပြိုင်ဘက်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် သင်၏ထူးခြားသော VISION + Mobile Photography Awards အသုံးပြုသူ ID ကိုဖန်တီးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပါ
ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကို သင် ပေးရမည်။ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကို မူရင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန် သင့်အား ဆက်သွယ်ပါမည်။ ဆုရသူများအနေဖြင့် ဆုများပေးရန် သင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် ဘဏ်အကောင့်များရရှိရန် လိုအပ်သည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဝင်ငွေခွန်အခွန်ရှောင်ခြင်းကိစ္စရပ်ကို သင်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးပါက သင်၏ ID သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ scan ဖတ် မိတ္တူများကို သင့်အား သီးခြားစီ ဆက်သွယ်ပါမည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း သင်၏ အသက်သည် ပြိုင်ပွဲ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် သင့်အသက်သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အချိန်မရွေး သင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပါဝင်မှုကာလအတွင်း သင်၏အခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို သေချာစေရန် သင်ပေးအပ်သော ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်သည် မှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေပါ။ မမှန်ကန်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ဖန်တီးမှုလက်ရာများ နှင့်၊ (သို့မဟုတ်) မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့ ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက သင်၏ လက်ရာများကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ချီးမြှင့်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို တင်ပါ
သင်သည် “ End of Submission (တင်သွင်းမှု မကုန်ဆုံးမီ) ” ပြိုင်ပွဲတွင် သင် ပါဝင်နိုင်ပြီး သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များ (ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် ဗွီဒီယိုများ) နှင့် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို သူတို့၏ခေါင်းစဉ်များ၊ ဖော်ပြချက်များ၊ အမျိုးအစားများ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်နေရာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းမော်ဒယ်လ်များနှင့် ဓာတ်ပုံများ၏ EXIF စသည့် အချက်အလက်များကို တင်ပို့ပြီးနောက်တွင် စုဆောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်သည် သင်၏ vivo VISION + Mobile Photography Awards ID နှင့်အတူတကွ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တင်ဆက်မှုအားလုံးကိုဗဟိုမှစီစစ်ဆုံးဖြတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရုတ်ဆာဗာများတွင် သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ သင်၏ vivo VISION + Mobile Photography Awards ID အရ သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိစစ်ဆင်ရေး ၀ န်ထမ်းများအား ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်၍ သင်၏ပြိင်ပွဲဝင်လက်ရာများကို အတည်ပြုခြင်းနှင့် ဆုများထုတ်ပေးခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမည်။ “ Preliminary Judging Phase” အပြီးတွင် သင်၏လက်ရာများကိုတင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းများကို vivo VISION + Mobile Photography Awards တွင် တင်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်က ကျွန်ုပ်တို့အား China တွင် ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်ပြုသည်။ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် မြှင့်တင်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လည်း သင်၏ခွင့်ပြုချက်အရ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ သင်၏အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလက်ရာများ၊ အကောင့်အမည်နှင့် ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံများကို ကမ္ဘာသို့ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ပြခန်းများကို တင်သောအခါ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုပေးပြီး“ ပြခန်း(Gallery)” တွင် ဤခွင့်ပြုချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်အသစ်သည် လာမည့်နေ့များအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သင်၏ယခင်ခွင့်ပြုချက်အရ အထက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုက အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်းသင်နားလည်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါသည်။
ပူးပေါင်းပါဝင်သူများအတွက် တင်ထားသောပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာများနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို သင်၏ခွင့်ပြုချက်အရ (သို့မဟုတ်) ပြိုင်ပွဲသဘောတူညီချက်အရ စိစစ်ပြီးနောက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများကို ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိ သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် သင်၏ရိုက်ချက်များ (ဓါတ်ပုံများ သို့မဟုတ် ဗွီဒီယိုများ)၊ သူတို့၏ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာခေါင်းစဉ်၊ အမျိုးအစား၊ ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်နေရာ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းမော်ဒယ်နှင့် လက်ရာအကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်) နှင့် သင့်အကောင့်မှ ခွင့်ပြုထားသော သင်၏ သုံးစွဲသူအမည်၊ ပရိုဖိုင်းဓါတ်ပုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏တည်နေရာ (နိုင်ငံသို့မဟုတ် ဒေသ) ကဲ့သို့သော သင်၏အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခြင်း, အနိုင်ရရှိသူများအား ကြေညာခြင်းနှင့် ဆုပေးအပ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပါဝင်သူများ တင်သွင်းသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာများအားလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင် ဗဟိုပြုနည်းဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်အကဲဖြတ်ပါမည်။ ပါဝင်သူ၏ခွင့်ပြုချက်အရ ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများကို vivo VISION + Mobile Photography Awards ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ “ တင်သွင်းမှုအဆုံး” (ဆိုလိုသည်မှာပြိုင်ပွဲသည်“ ပဏာမအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးအဆင့်” သို့ရောက်သွားသည်) ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင် ဆက်သွယ်နိုင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပါဝင်သူများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပဏာမစာရင်းရွေးချယ်မှုများကို စစ်ဆေးသည့်အခါ သင်၏လက်ရာအစစ်အမှန်များ ဟုတ်မဟုတ်နှင့် vivo လက်ကိုင်ဖုန်းများဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းရှိမရှိ အတည်ပြုရန် သင့်အားပေးအပ်သည့် အဆက်အသွယ်အချက်အလက်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏နောက်ဆုံးဝင်ရောက်ခြင်းအဆင့်အပြီးတွင် သင်၏ ဝင်ရောက်မှုသည် ဆုရရှိခဲ့ပါက vivo VISION + Mobile Photography Awards ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အနိုင်ရသော အရာများကို ပြသနိုင်သည် (သို့မဟုတ်) ပြသပြီး သင်၏ခွင့်ပြုချက်အရ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းမိတ်ဖက်အစီအစဉ်များတွင် ပြသနိုင်သည်။ လူသိရှင်ကြားကြေညာမည့် သတင်းအချက်အလက်များတွင် သင်၏ရိုက်ချက်များ (ဥပမာ - ဓါတ်ပုံများ သို့မဟုတ် ဗွီဒီယိုများ)၊ အချက်အလက်များ (ဥပမာခေါင်းစဉ်များ၊ အမျိုးအစားများ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်နေရာ၊ ဖော်ပြချက်များ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းမော်ဒယ်နှင့် ဓာတ်ပုံများ၏ EXIF) နှင့် သင်၏သုံးစွဲသူအမည်၊ နိုင်ငံနှင့် အနိုင်ရဆုများ ပါဝင်နိုင်သည်။
အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများက သင့်ကိုဆက်သွယ်ကောင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပဏာမပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာစာရင်းရွေးချယ်မှုများကို စစ်ဆေးသည့်အခါ သင်၏လက်ရာများနှင့် vivo လက်ကိုင်ဖုန်းများဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းရှိ၊ မရှိကို အတည်ပြုရန်အတွက် သင့်အားပေးအပ်သည့်ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်မှတစ်ဆင့် သင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ သင်၏အလုပ်သည် ဆုရရှိသည့်အခါဆုများ ထုတ်ပေးရန်သင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဘဏ်အကောင့်နှင့်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ရယူရန် (သို့မဟုတ်) အတည်ပြုရန် သင့်အားပေးအပ်သည့်ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
၂။ ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
သင်နေထိုင်သည့် နိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဒေသရှိ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအရ သင့် အနေဖြင့်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၏ခံစားခွင့် အပြည့်အ၀ ရှိရမည်။ မဟုတ်ပါက သင်၏လျှောက်ထားသူများသည် ဤလျှောက်လွှာကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိုလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူရမည်။ မိဘများနှင့်အုပ်ထိန်းသူများသည် ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်းအပါအဝင်ကလေးများကို ကာကွယ်ရန် သင့်လျော်သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်သင့်သည်။
၃။ တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုများနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်း
ပြိုင်ပွဲ၏ ဤတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အပြင် vivo ၏ အွန်လိုင်းနှင့် အော့ဖ်လိုင်း မိတ်ဖက်လိုင်းများမှတဆင့် ဆုရရှိသူများကို ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်၊ ဒီ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်နှင့် အခြားသင့်လျော်သောလျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးအစီအမံများအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ရန် တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများ၊ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ (သို့မဟုတ်) တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်ဆံသွားပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှုများ (ဥပမာ- အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဝင်ရောက်ခြင်းကိုပြခြင်း၊ ဆုရသူကိုကြေညာခြင်းနှင့် ဆုများပေးခြင်း)၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှုများ (စနစ်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဒေတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူအမည်၊ ID အမည်၊ နေထိုင်သည့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်၊ အချက်အလက်နှင့်ဖော်ပြချက်၊ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့် ဘဏ်အကောင့်များနှင့် ဆက်စပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ၊ လက်အောက်ခံများ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လိုအပ်သလို မျှဝေရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းအချက်အလက်များကို vivo VISION + Mobile Photography Awards ၏ရည်ရွယ်ချက် မှလွဲ၍ အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
သင်၏အဖွဲ့ဝင်များ၊ (ဖိုရမ်များကဲ့သို့) နိုင်ငံအသီးအသီး (သို့မဟုတ်) ဒေသအသီးသီးမှ ကျင်းပသော vivo VISION + မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံဆုပေးပွဲ၏ ကဏ္ဍခွဲများတွင် ရွေးချယ်ပါက ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် အကြံပြုပေးသွားပါမည်။ ဤအမှုများနှင့် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် စီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်။ Sub-session တစ်ခုစီ၏ စီစဉ်သူများသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏ ပဏာမပြိုင်ပွဲများအတွင်း ကောက်ယူရရှိသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကောက်ယူရန်နှင့်စီမံရန် တာဝန်ရှိသည်။
၄။ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ ထုတ်ဖော်မည်နည်း?
အခြေခံအားဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ထုတ်ဖော်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အောက်ပါကိစ္စများတွင်သာ ထုတ်ဖော်ပြသပါမည်။ သတင်းအချက်အလက်ဖွင့်ဟခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ထုတ်ဖော်ရမည့်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားကို သင့်အား အသိပေးပါက၊ ဥပဒေရေးရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့မဟုတ်) အာဏာပိုင်များအားဖြင့် ထုတ်ဖော်လိုအပ်ပါသည်။ ထုတ်ဖော်ခြင်းသည် အများပြည် ပြည်သူလုံခြုံရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့်နေရာနှင့် အခြားစည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများအားဖြင့်ထုတ်ဖော်လိုအပ်သည့်ကိစ္စများ အစရှိသည့် ကိစ္စများတွင်သာ ဖော်ပြသွားပါမည်။
၄။ သင့်ဒေတာများကို စီမံခန့်ခွဲရန်
သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ရယူရန်၊ ပြင်ဆင်ရန် (သို့မဟုတ်) ဖျက်ရန်ကူညီရန်နှင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းမှ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် သင်၏အခွင့်အရေးကိုလည်း အာမခံရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်ဆန်လွယ်ကူသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်သည် အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း စနစ်အတွင်း လည်ပတ်နိုင်သည်။
သင်၏ ကျား၊ မ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်လက် ကဲ့သို့သော ပြိုင်ပွဲပလက်ဖောင်းတွင် သင်ပေးထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မွမ်းမံရန် (သို့မဟုတ်) ဖျက်ရန်အချိန်မရွေး “ Personal Profile(ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်)” ကို သွားရောက်လေ့လာနိုင်သည်။ တင်သွင်းမှု အဆုံးမတိုင်မီ သင်၏အလုပ်များကို ပြင်ဆင်ရန် (သို့မဟုတ်) ဖျက်ရန် “(Gallery) ပြခန်း” သို့သွားနိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း ပြိုင်ပွဲ၏မျှတမှုကို သေချာစေရန် သင်၏ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာကို တင်သွင်းပြီးပါက လက်ရှိအမှတ်ပေးစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါက ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာများကို တင်ပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ထားသော ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာမျာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်ပါက “ End of Submission(တင်သွင်းမှုအဆုံး)” (ဆိုလိုသည်မှာ ပြိုင်ပွဲသည်“ Preliminary Judging Phase) ပဏာမအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးရေးအဆင့်”) နှင့်“ Final Judging Phase(နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းအဆင့်)” ကြား အဆင့် ဖြစ်သည်။ သင်၏အလုပ်ကို ဖျက်ရန် (သို့မဟုတ်) မေးခွန်းများရှိပါက visionplus@vivo.com သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏ vivo VISION + Mobile Photography Awards အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်၍ “ Personal Profile(ကိုယ်ရေးရာဇဝင်)” ရှိ Cancel Account” ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ အကောင့်ကို မဖျက်သိမ်းမှီ၊ သင်၏တင်ထားသော လက်ရာများကို ပြိုင်ပွဲပလက်ဖောင်းမှ ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်း အကျိုးသက်ရောက်လာသောအခါ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အားလုံးကို ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ဖယ်ထုတ်သွားပါလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ခါ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ဝင်သောအခါ၊ စနစ်သည် သင့်အား ပါဝင်သူ အသစ်တစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် ဖျက်ထားသော အချက်အလက်ဟောင်းများကို သင် ကြည့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် (သို့မဟုတ်) ဖျက်ရန် “၆။ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ(How to contact us)" တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း သင် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သင် အော့ဖ်လိုင်း ကိုသင် ပေးသော အခြားသတင်းအချက်အလက်များသည် အချက်အလက်သိုလှောင်ကာလကုန်ဆုံးပြီးနောက် အလိုအလျောက် ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ထိုကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် (သို့မဟုတ်) ဖျက်ရန်လိုအပ်ပါက“ ၉။ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ (How to contact us)" တွင် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆက်သွယ်ပေးပါ။
သင့်တွင်သော အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်သော ထပ်မံတောင်းဆိုမှုများ (သို့မဟုတ်) မေးခွန်းများ၊ အကြံပြုချက်များ (သို့မဟုတ်) အကြံဉာဏ်များရှိပါက သင်၏သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးရန် visionplus@vivo.com တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
၅။ ဒေတာသိုလှောင်ရာ နေရာနှင့် အချိန်ကာလ
ဒီ vivo VISION + Mobile Photography Awards တွင် ပါဝင်သောအကောင့်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများက အခြားနည်းဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လိုအပ်သောအချိန်ကာလတစ်ခုအထိသာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါထိန်းသိမ်းထားသည့်ကာလကုန်ဆုံးပြီးနောက် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဖျက်သိမ်း (သို့မဟုတ်) အမည်ဝှက် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိသေးသောသူများ (သို့မဟုတ်)“Gallery (ပြခန်း)” ရှိ မည်သည့်ဆုကိုမဆို ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးသောသူများအား သင်၏ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာများကို ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင်သင်၏ အသက်၊ ကျား / မ (သို့မဟုတ်) အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်အခါ (သို့မဟုတ်) ဖျက်ပစ်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏သက်ဆိုင်ရာဒေတာများကို ဆာဗာများမှ ချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ သင်သည် သင်၏အကောင့်ကိုစနစ်ရှိ အကောင့်ဖျက်သိမ်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့် သင်၏အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားလုံးကို ချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာများအားလုံးသည် စကာတင်စာရင်းများအောက်တွင် မပါရှိပါက vivo VISION + Mobile Photography Awards platform ပေါ်ရှိ အချက်အလက်များအား ချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ သင့်အကောင့်ကို ဖျက်ပစ်လိုပါက “ ၆။ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။ (How to contact us)" မှ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆက်သွယ်ပေးပါ။
ဤအတောအတွင်း၊ vivo သည် ဥပဒေနှင့်အတည်ပြုချက်များအရ လိုအပ်သည် မှလွဲ၍၊ ဤမူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသော ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို vivo က သိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ - (၂)နှစ်၊ ထိုကဲ့သို့သော ကာလ သို့မဟုတ် ဥပဒေများကခွင့်ပြုသလို ထပ်တိုးရန် ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ဥပဒေများအရ လိုအပ်မှုမရှိလျှင်။
ဝယ်ယူအားပေးသူများ၏ တောင်းဆိုမှုများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို သေချာစေရန် အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ တိုင်ကြားချက်များ (သို့မဟုတ်) အကြံပြုချက်များနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သော ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ဝယ်ယူအားပေးသူဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို သီးသန့်အာမခံခန်ပေးရန် အကောင့်အားဖျက်သိမ်းသည်ဖြစ်စေ၊ မဖျက်သိမ်းသည်ဖြစ်စေ (၅) နှစ်ကာလအထိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ရပ်တန့်သွားပါက ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြေငြာချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊ သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) အမည်ဝှက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးသွားမည်။
သင့်တွင် အခြားတောင်းဆိုမှုများ (သို့မဟုတ်) မေးခွန်းများရှိပါက“ ၉။ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ( How to contact us)” မှ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆက်သွယ်ပေးပါ။
vivo သည် မူဝါဒအား အခါအားလျော်စွာ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီ၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲခြင်းသည်တစ်ပြိုင်နက် vivo သည်သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာများပေါ်တွင် ပြောင်းလဲထားသော အကြာင်းအရာများကို ပြလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲခြင်းသည် သင်၏အခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးစီးပွားများအပေါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသော် သင်ပြောင်းလဲမှုကို သိသာထင်ရှားသောနည်းလမ်းဖြင့် အသိပေးသွားမည် (သို့မဟုတ်) သင့် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသွားပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်ပေါ်လစီသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရာတွင် vivo လိုက်နာရမည့်စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်သော်လည်း vivo သည်သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာပြီး သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အစီအမံများကို ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော် သင်၏အချက်အလက်နှင့် အချက်အလက်များကိုအခြားသူက မည်သို့စုဆောင်းသည်နှင့် မည်သို့အသုံးပြုသည်ကို vivo သည် ထိန်းချုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင် သိရှိနားလည်ရမည်။ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မဆို သင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့် အချက်အလက်များကို အပြည့်အဝ မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့် အခြေအနေများကို မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ထုတ်ဖော်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မအာမခံနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်၊ third party မှ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင် အသုံးပြုနေစဉ် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကို ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် လိုအပ်ချက်များအရ စုဆောင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏တတိယပါတီ၏ လုံခြုံရေးမူဝါဒကို ဖတ်ရှုရန်နှင့် သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကို တင်ပြသည့်အခါ သတိထားရန် သင့်အား အကြံပေးလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့် အချက်အလက်များကို အခြားတတိယအဖွဲ့အစည်းမှကောက်ယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကတိကဝတ်မပြုပါ။ vivo ကြောင့် မဟုတ်သော သင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့် အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်းအတွက် မည်သည့်တာဝန်ယူမှုမှ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၉။ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ(How to contact us)
သင့်တွင် မေးခွန်းများ၊ အကြံပြုချက်များ (သို့မဟုတ်) အကြံဉာဏ်များရှိပါက visionplus@vivo.com တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ- ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ၏ ကွဲပြားသော ဘာသာစကားမူကွဲများသည် ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် ဘာသာစကားများကွဲပြားမှုကြောင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောခြားနားချက်မျိုးရှိပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသောဗားရှင်းကို လွှမ်းမိုးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သင် သဘောတူသည်။
Copyright © 2020-present vivo Mobile Communication Co., Ltd. All rights reserved.
မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာ - အမှတ် ၁၆၈၊ ဂျင်ဟိုင်းအရှေ့လမ်း၊ ချောင်အမ်းမြို့၊ ကုမ်သွမ်မြို့, ကွမ်သုံးပြည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ။